Cusbooneysiin - Foton Motor Group Co., Ltd.
Warshadaha mootada FOTON 4.0
Nidaam caalami ah oo heer caalami ah oo loo yaqaan 'R&D system' oo leh Beijing oo ah xarunta dhexe, Jarmalka oo ah xarunta elektaroniga & qalabka korontada iyo tikniyoolajiyadda mustaqbalka iyo Japan oo ah R&D tijaabada gawaarida rakaabka si loo dhiso awood casriyeyn heer caalami ah.
Baadhitaan iyo Hormarin
farsamada iyo dadnimada
Awood cusub ayaa ka soo baxda isweydaarsiga u dhexeeya tiknoolajiyada iyo aadanaha. Xarumaha R&D ee FOTON ee Shiinaha, Jarmalka iyo Jabaan ayaa waxay ururiyeen 6,500 oo injineero ah oo ka kala yimid 40 wadan waxayna markhaati ka ahaayeen 5,000 shatiyada R&D.
AWOODAHA R & D001
Tijaabinta iyo xaqiijinta
awoodaha tijaabada jilitaanka
Awoodda tijaabada jilitaanka warshadaha ee hogaaminta warshadaha oo ay kujiraan badbaadada shilalka, aerodynamics iyo jilitaanka NVH iyo hagaajinta taasoo si wax ku ool ah u hagaajineysa khibrada wadista gaariga, amniga iyo kalsoonida.
IMISA AMMAANKA AMMAANKA
Tijaabada xoogga cab ayaa hogaaminaya warshadaha.
Kii ugu horreeyay ee sameeya falanqaynta aerodynamics CFD iyo tunnelka dabaysha baabuurta ee Shiinaha, wuxuu yareynayaa iska caabbinta dabaysha 20% wuxuuna badbaadinayaa 4% shidaalka.
NVH ISKUULKA IYO IMTIXAANKA IMTIXAANKA
Keydka tikniyoolajiyada jilista NVH ee hogaamisa warshadaha, hagaajinta khibrada wadista gaariga si wax ku ool ah iyadoo la yareynayo gariirka iyo buuqa qeybaha muhiimka ah sida mashiinka, jirka iyo jiiska.
Xasiloonida hawlgalka Global-horseedka iyo habsami u socodka
Isku halaynta iyo hormarinta warshadaha
DARAWAL CAQLI BADAN
dad, gaari xamuul iyo waddo
FOTON waxay soo saartay gaari xamuul ah oo ugu horeeya Shiinaha sanadkii 2016. Macluumaadka waxaa la wadaagayaa dadka, xamuulka iyo wadada si amaan ah, raaxo leh, keydinta tamarta iyo wadida wax ku oolka ah ee loo maro IOV, xog weyn iyo adeegsiga wadista iswada ee L3. Soo saar ballaaran ee gaari xamuul ah ayaa la bilaabi doonaa sanadka 2025.
IFOTON, oo ah hormuudka adeeg bixiyaha IOV, ayaa isku xira bini'aadamka, gawaarida iyo boosteejada iyadoo lagu saleynayo IOV, xog weyn iyo madal daruur ah si ay ula wadaagaan macluumaadka waqtiga dhabta ah, si dhaqso leh ula xiriiraan adduunka una hagaajiyaan gaariga R&D, wax soo saarka, suuq geynta iyo adeegga si ay awood ugu yeeshaan Isticmaalayaasha si ay u helaan hawlgal caqli & xakameyn iyo khibrad isku xirnaan oo ka baxsan wadista gaariga. IFOTON waxay siisaa xalal muhiim ah IOV gawaadhida FOTON, macaamiisha ka socda warshadaha, wakiilada iyo sidoo kale alaab-qeybiyeyaasha, la-hawlgalayaasha iyo dawladda.
UBI Caymis keydinta Gaarka ah Xamuulka u dhigma Shidaalka ayaa bixiya Shidaalka u dhow Baaritaanka sharci darrada ah Waqtiga taraafikada Meel u dhow Cunitaanka Meel u dhow halka baabuurta la dhigto Saldhigga adeegga ugu dhow
ogaanshaha fog Khalad samatabbixinta Buugga socdaalka Buugga khibrad Baabuur La-dagaallanka xatooyada La-socoshada xusuusinta badbaadinta xaaladaha degdegga ah
Hormarinta Badeecada Hormarinta Tayada Maareynta Suuqgeynta Falanqaynta Suuqa